🥇 ▷ Huawei Mate X: wuxuu la imaan lahaa Kirin 990 iyo hormarinta kaamirooyinkooda ✅
Huawei Mate X: wuxuu la imaan lahaa Kirin 990 iyo hormarinta kaamirooyinkooda
The Huawei Mate x wali waa war, dhowr toddobaad ka hor waxaan ka wada hadalnay dib u dhackiisa cusub sida ugu dhakhsaha badan bilowga dhamaan dhagaystayaasha; Noofembar ayaa haray sida bishii la doortay. Laakiin markan waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah astaamaha ay dhowaan daadday, taasina waxay keeni doontaa horumarino muhiim u ah akhlaaqda wanaagsan; laakiin ka sarreeya waxqabadkeeda oo lagama maarmaan u ah mobilada aadka u sareeya.
Waxaa loo malaynayaa in Huawei Mate X la imow processor aan wali soo saarin mobiil kasta, waxaan ka hadlaynaa Kirin 990 isbeddel xiiso leh oo ku saabsan ilaa 980 oo xajisto P30-ka. Macluumaadkan waxaa la siiyaa iyada oo loogu mahadcelinayo saaxiibbada Huawei Central, taas oo ay sidoo kale xaqiijinayaan inay jiraan horumarin badan oo lagu sameeyay qaybta sawirka.
Huawei Mate X iyo daqiiqaddii ugu dambeysay isbeddelo
Sida kor ku xusan; ah Huawei Mate X ayaa dib u dhacay sababao kala duwan awgood, iyaga ka mid ah isbeddeladaada xiisaha iyo badhanka badhanka. Laakiin qaar badani waxay filayeen inay sidoo kale jireen kala duwanaansho qaybo ka mid ah qaybaha ay ka mid yihiin; waxaa lagu soo bandhigay MWC, oo uu kujiro processor-ka; Wax u muuqda run. Oo kanu wuxuu ahaa wax macquul ah maadaama moobiilku aan weli iib ahayn, ka dibna suuqa la imaado taleefan casri ah oo leh astaamo laga soo bilaabo sanadkii hore; Waxay macaamil ku noqon kartaa macaamiisha markay iibsanayaan.
Haddii imaatinka Kirin 990 ayaa la xaqiijiyay, waxaan hor joogsan karnaa terminaal kaasoo noqon kara ilaa waqtiyada, waxaana laga yaabaa inaan hore u helno xawaarehiisa Marwada 30; taasi waxay noqon lahayd Mobiles-kii ugu horreeyay ee lagu daro. Dhanka kale, waxaa la sheegay inay jiri doonaan horumarin kaamirooyinka taas oo ah; sida laga soo xigtay isha ay ku saabsan tahay aaladda RYYB halkii laga isticmaali lahaa RGB la aqoonsan yahay; Tan waxaad awood u yeelan doontaa inaad qabato ilaa 40% iftiin dheeraad ah.
Waxaan rajeyneynaa inaan helno macluumaad dheeraad ah maalmaha soo socda, sidaa darteed la soco boggayaga internetka.